Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပကြယ်ပွ Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
သြဂုတ်လ 18, 2018
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်အားဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Batsman"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) များစွာသောအခြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စရာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုချွတ်ဆွဲထုတ်ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုသိပေမယ့်မှသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Michy Batshuayi ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အစောပိုင်းနှင့်မိသားစုဘဝ
ချွတ်စတင်ကာ Michy Batshuayi Atunga ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အောက်တိုဘာလ2၏ 1993nd ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့မိခင်, Vivian Leya Iseka နှင့်သူ၏ဖခင်, Pino Batshuayi မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးမိဘများအာဖရိကဆင်းသက်လာ၏ဖြစ်ကြပြီးပြန်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှ၎င်းတို့၏အမြစ်များခြေရာကောက်။ သူတို့ကရေကြည်ရာမြက်နုရာရှာ Belguim ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ရသေးမွေးသေးသောသူတို့သားသမီးများအတွက်ကောင်းစွာဖြည့်တင်းရန်။
ဘရပ်ဆဲလ်မှာကြီးပြင်းလူငယ် Batshuayi သူ့ကိုနှင့်သူ၏မှေးခငျြးအားပေးအားမြှောက်သောမိမိအားကစား-မေတ္တာရှင်မိဘများ၏ထောက်ခံမှုကိုခဲ့ အာရုန်သည် Leya Iseka သူတို့အဘို့စိတ်အားထက်သန်ခဲ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်လေ့ကျင့်ဖို့ (လည်းဘောလုံးသမား) ။
သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုအထူးသဖြင့် Bathshuayi သာသူ့ရွယ်တူချင်းအကြားထွက်မတ်တပ်ရပ်စေဒါပေမယ့်လည်းဘောလုံးအတွက်အကျိုးစီးပွားကောက်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးသောမိမိနည်းနည်းအစ်ကိုပေါ်ချွတ်ပွတ်မပြုခဲ့ရသောလုံ့လရှိသူဘောလုံးစွမ်းရည်ပြသဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
Batshuayi ၏မိဘများသည်သူသည်မိမိကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဘယ်မှာလေးလူငယ်အချို့ကလပ်အကြားပထမဦးဆုံးလူငယ်တစ်ဦးအကယ်ဒမီ, ကို RFC အစဉ်အဆက်မှာသူ့ကိုစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုတစ်ခုထပ်တိုးပေးတျောမူခင်ကရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
Batshuayi သည်သူ၏လူငယ်ကလပ်ကြိုးပမ်းစဉ်အတွင်းနှင့်အတူဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကဘောလုံးရိုဖြတ်သန်းခြင်းမရှိဘဲဘောလုံးနှင့်အတူကြာမြင့်စွာပြေးအောင်သည်သူ၏သဘောထားကို, သူ့အသင်းဖော်သူ့ကိုအဖြစ်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖန်ဆင်းသောရိုဖြစ်ခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေသူသည်မိမိအရိပ်မိတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကျော်လွန်မြင်၏သည်အခြားကလပ်အသင်းကနေကင်းထောက်တွေနဲ့မျက်နှာသာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မိမိအမြောက်မြားစွာလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြားထင်ရှားတဲ့သူတစ်ဦးစင်တာ-ရှေ့ဆက်များ၏စွမ်းရည်အတွက်ကစားနှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုအပ်ဘယ်မှာ 2007 အတွက် Anderlecht လူငယ်ကလပ်အားမိမိပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းပုံစံ 2008 ၌သူ၏န်ဆောင်မှုများလုံခြုံတဲ့သူပြိုင်ဘက်ကလပ်နျ Standard Liege အားဖြင့်သတိမပြုမိမသွားခဲ့ပါဘူး။ Batshuayi သည်မိမိအထင်ကြီးဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူကလပ်မှာမိမိကိုမိမိအဘို့နယ်ပယ်ထွင်းသူ 18 အသက်ခံခဲ့ရသည့်အခါအကြီးတန်းအဖွဲ့ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-Fame ရန်ထလော့
Batshuayi သူများအတွက်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တိုးတက်မှုဆုံးရှုံးဖို့တဦးတည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ မိမိအထိန်းသိမ်းထားထိပ်တန်းပုံစံသူ့ကိုနျ Standard Liege များအတွက် 21 / 2013 ရာသီအတွင်း 2014 ရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ အခွားသူမြားစှာတို့တွင် feat သူ့ကိုဘယ်လ်ဂျီယံပထမဦးဆုံးဌာနခွဲအသင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအာဖရိကအကောင်းဆုံးကစားသမားအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ပေးသော Ebony ဖိနပ်ဆုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Bathshuayi Marseille, သူ 2014 အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ပြင်သစ်ကလပ်မှာမိမိအမှတ်ပေး artistry ဆက်ပြောသည်။ ဒါဟာသူ့ဂိုးသွင်းပုံစံကိုချဲလ်ဆီးအသင်းနှင့် Westham အပါအဝင်ထိပ်တန်းအင်္ဂလိပ်အသင်းများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းမိကြောင်း Marseille မှာခဲ့ပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-relationship ဘဝ
Batshuayi သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဘဝအကြောင်းကိုရှေးရိုးစွဲဖြစ်ကြောင်းအလွန်နည်းပါးမှတ်သားလောက်ဘောလုံးကစားသမားအကြားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူတိုင်းချောမောရှာဖွေနေအခန်းယခုအချိန်တွင်ချိန်းတွေ့နိုင်သူကိုအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များထားရှိမည်သိရသည်။
အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပင်တစ် outing အပေါ်ယျတျောနှငျ့အတူမြင်ကြပြီ။ များစွာသောသူပုဂ္ဂလိကသည်သူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝစောင့်ရှောက်ခြင်းမှာကောင်းလှ၏ယုံကြည်နေချိန်မှာ, အခြားသူများကသူသည်မိမိအဖျားခါသို့မဟုတ်ရည်းစားထုတ်ဖော်ပြသမတိုင်မီအချိန်ပဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ စိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေကျနော်တို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ updates များကိုပေးမယ်လို့သူတို့ဖြစ်ပေါ်အဖြစ်နှင့်စပ်လျဉ်း။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ဖီဖာ Ratings အဖွဲ့နှင့်အတူပြဿနာ
Michy တကယ် EA ၏အားကစား '' အကျယ်လူကြိုက်များဘောလုံးဂိမ်း၌သူ၏ ratings အလေးထားသောသူကိုကစားသမားအကြားဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသည်သူ၏ 2018 ဖီဖာလွှတ်ပေးရေးရန်သူ၏တုံ့ပြန်မှု Watch;
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ထင်ရသောမသင့်လျော် Expression
Batshuayi ချယ်လ်ဆီးမှာနေစဉ်အဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ်များရိုက်ကူးသူ့ကိုသူ၏အခငျြးကိုအသင်းဖော်မှာရယ်မောဖမ်းအားထင်ရှားပြီးနောက်သူမိုးသည်းထန်စွာမီးအောက်မှာ လာ. , Alvaro Morata တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်ဆုံးရှုံးသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် 2017 အသိုင်းအဝိုင်းဒိုင်းလွှား၏ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်အတွက် Arenal မှချယ်လ်ဆီးရဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ရှုံးနိမ့်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Batshuayi အထင်ကြီးဖို့ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဂိမ်း၏ 74th တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ Morata ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါဂိမ်းဆုရှင်ဆုံးဖြတ်ပြစ်ဒဏ်များထွက်ခွာတစ် 1-1 သရေကျနှင့်အတူ deadlocked ခဲ့သည်။ Alvaro Morata အတူတကွနှင့်အတူ Thibaut Courtois အာဆင်နယ်ပွဲအနိုင်ရမြင်ဘူးသောပြစ်ဒဏ်များကန်လွဲချော်။ ရိုက်ကူး Batshuayi သိသာဆုံးရှုံးမှုအားဖြင့်တုန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ Morata နောက်ကွယ်မှရယ်မောပြသသည်ထင်ရှားလာသောအခါအဘယျသို့ပရိသတ်တွေစိတ်ပူပန်တယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော် Batshuayi သူသတိပြုမိကမှားအယူအဆအဖြစ်ကိုယူသောအရာကိုပြင်ပေးဖို့အကြာတွင်တွစ်တာအချိန်လေး သွား. :
"Wow အရမ်းရယ်ရတယ်တချို့လူတွေတကယ်ငါသည်ငါ့အသင်းဖော်မှာရယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးရှုံးယုံကြည်? စိတ်ပျက်ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါ "မဟုတ်ခဲ့
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ရုပ်ပြကိုခစျြ
Batshuayi ကာတွန်းစီးရီးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အောက်ပါများအတွက် penchant ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်သူ့အသိဆိုထားသည်အဖြစ်သူ၏ pastime လှုပ်ရှားမှုများတဦးဖြစ်သည့်လှုပ်ရှားမှုဖျော်ဖြေရေးကျော်လွန်အထိသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သူ့အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းဇာတ်ကောင်အကြားမှတ်သားလောက်ရေမြှုပ်ဘော့သည်နှင့်သူရေမြှုပ်ဘော့ကာတွန်း၏လုံလောက်စွာရှိဟန်ဘူး။
ထို့အပြင်သူသည်တစ်ချိန်ကကကိရိယာအစုံအောက်မှာတစ်ဦးလက်ဝှေ့သမားဝတ်ထားကိုတွေ့လိုက်တယ်။ (ပွင့်လင်းဘောင်းဘီတိုအောက်မှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ) ကိုလက်ဝှေ့သမားကသူ၏ကိရိယာအစုံအောနက်ရှိုင်းသောပင်လယ်ဇာတ်ကောင်သရုပ်ဖော်သည်။ အမှန်စင်စစ်ကာတွန်းဘို့သူ့မေတ္တာမျှဘောငျသိတယ်။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-နှလုံးမှာ Big Kid
Batshuayi ကစားစရာသူ၏စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်သူ၏အသက်အရွယ်ပြုမူဟန်ကိုဘယ်တော့မှသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 25 နှစ်အရွယ်သူသည်မိမိအပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြတိုက်အဖြစ်ဖော်ပြပေးသောကစားစရာ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြတိုက်" သေးသေးလေး Collection ကစားစရာနှင့်ပြည့်စုံကြီးမားတဲ့ဖန်ကက်ဘိနက်ပါရှိပါတယ်။
မရင့်သေးငယ်တဲ့ကစားစရာအရုပ်, Batshuayi ထင်ရသောသည်မိမိအသက်အရွယ်နှင့်လိုက်ဖက်သောအတွေ့ရှိခဲ့ကြီးမားတဲ့ကစားစရာရှိသည်ဖို့ပုံရသည်။ နာမည်ကျော်ကာတွန်းနဂါး Ball ကို Z. ထံမှ၎င်း၏ full-size ကိုရုပ်တု
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-အမည်ဝှက်နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းရင်းများ
ကြောင့်ရုပ်ပြသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, Batshuayi သည့်အမည်ပြောင် '' Batsman 'သူ likes နှင့်လည်းသူ့ကိုသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ဇာတ်ကောင်ပေးထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Batman ဇာတ်ကောင်ဟာမတွေးဝံ့စရာလုပ်ဖို့အမှောင်ထဲမှာထံမှလာသည်ဟုတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
Batshuayi ခုံကနေလာနေတုန်းပဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထုတ်လုပ်များ၏မှော်ပါဘူး။ သူကတစ်ချိန်ကသူသည်သူ့မျက်မှောက် backfiring ပန်းတိုင် post မှပစ်ခတ်ဘောလုံးကိုမြင်သည်အတိုင်းပန်းတိုင်စကားပြောသော, Michy ရဲ့ဖီဖာ 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားရည်မှန်းချက်အခမ်းအနားနည်းဗျူဟာတစ်ချိန်ကသူ့ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts-ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်အလက်
Michy Batshuayi သူဘာလုပျသလဲချစ်သောသူများနှင့်အမှုအရာသူစီစဉ်ထားလမ်းကိုမသွားလျှင်ပင်ရုပ်ပြကယ်ဆယ်ရေး radiates တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်သူ၏အောင်မြင်မှုများအင်အားစိုက်ထုတ်ကြည့်ရှုစေရန်အကောင်းဆုံးသည်မိမိတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Michy Batshuayi ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
Andriy Yarmolenko ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
အလက်ဇန်းဒါး Isak ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
သောမတ်စ် Meunier ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Divock Origi ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Jadon Sancho ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Sokratis Papastathopoulos ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Paco Alcacer ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Miralem Pjanic ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
vannyhenrico - သြဂုတ်လ 2, 2018
ဂိုးသမား Iker Casillas ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မေလ 6, 2019
Arda Turan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဇြန္လ 18, 2017
vannyhenrico - ဇူလိုင်လ 26, 2017
အဲရစ် Bailly ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
vannyhenrico - သြဂုတ်လ 19, 2018
vannyhenrico - ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2019
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2019
ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2019
နိုဝင်ဘာလ 30, 2019
Kylian Mbappe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မေလ 20, 2017
ရှင်ပေါလု Pogba ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဇြန္လ 21, 2016
မေလ 13, 2017
© Copyright 2016 - HagePlex Technologies ကကဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်ကို
ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဇန်နဝါရီလ 12, 2018
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2019
Ciro ရွေ့ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
သြဂုတ်လ 11, 2018
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2018
Andre Schurrle ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ရိုမီလူလူကာကူကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဇြန္လ 10, 2017